Traduzioni di announced da IngleseaBirmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di announced da IngleseaBirmano
around the world, countries announced stricter measures to inhibit the disease from spreading.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၊ နိုင်ငံများသည် ရောဂါပျံ့ပွားခြင်းကို ဟန့်တားရန် တင်းကြပ်သောစည်းကမ်းများကို ကြေညာခဲ့ပါသည်။
around 10 march 2020, emergent biosolutions announced that it had teamed with novavax inc.
2020 ပြည့်နှစ် မတ်လ 10 ရက်ခန့်က emergent biosolutions ကုမ္ပဏီသည် novavax inc နှင့် ပူးပေါင်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
2020 ပြည့်နှစ် မတ်လ 18 ရက်နေ့တွင် emergent biosolutions ကုမ္ပဏီသည် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရန်အတွက် vaxart ကုမ္ပဏီနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးမိတ်ဖက်အဖြစ်ပူးပေါင်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
on5march 2020, washington university in st. louis announced its projects to developavaccine.
2020 ခုနှစ် မတ်လ5ရက်နေ့တွင်၊ စိန့်လူးဝစ်ရှိ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်သည် ကာကွယ်ဆေးဖော်စပ်ရန် ၎င်းတို့၏ပရောဂျက်များကို ကြေညာခဲ့ပါသည်။
no quantity limitations were announced; specimen collection and processing must be performed according to cdc requirements.
မည်သည့် အရေအတွက် ကန့်သတ်မှုကိုမျှ ကြေညာခြင်း မရှိပါ။ တစ်ရှူးနမူနာ စုဆောင်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို cdc ၏ သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရမည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အီတလီနိုင်ငံသည် ကျောင်းများအား ပိတ်ရန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည့် တိုက်ကြီး သုံးတိုက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း 22 နိုင်ငံထဲမှ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။
the authorities also announced the construction ofatemporary hospital, huoshenshan hospital, which was completed in 10 days.
အာဏာပိုင်များက 10 ရက်အတွင်း ပြီးစီးမည့် ယာယီဆေးရုံ huoshenshan ကို တည်ဆောက်နေကြောင်းကိုလည်း ကြေညာခဲ့သည်။
on 15 february, the united states announced that it would evacuate americans aboard the cruise ship diamond princess.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် diamond princess ဇိမ်ခံသင်္ဘောပေါ်မှ အမေရိကန်လူမျိုးများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ 15 ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
as of5march 2020 labcorp announced nationwide availability of covid-19 testing based on rt-pcr.
2020 ခုနှစ် မတ်လ5ရက်တွင် labcorp သည် rt-pcr အခြေပြု covid-19 စမ်းသပ်မှုကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ရရှိနိုင်မှုကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
လူနာအယောက် 300 တွင် ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးများတွင် အီနိုဇပါရင်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော မာလ်တီစင်တာလေ့လာမှုအား ဧပြီလ 14 ရက်နေ့တွင် အီတလီ၌ ကြေညာခဲ့ပါသည်။
on 20 march 2020, russian health officials announced that scientists have begun animal testing of six different vaccine candidates.
2020 ပြည့်နှစ် မတ်လ 20 တွင် ရုရှားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရာရှိများက သိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့် မတူညီသည့် ကာကွယ်ဆေးသစ် ခြောက်မျိုးကို တိရစ္ဆာန်များတွင် စတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
on december 20, 2010, the council of islamic ideology also announced proposed amendments to the law to prevent its misuse.
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀တွင် အစ္စလာမ် ဒဿနကောင်စီက အလွဲဆိုသုံးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ထိုဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် အဆိုတင်သွင်းမှုများကို ကြေညာခဲ့သည်။
on 25 march the head of the research institute announced that they had finalized the synthesis of the vaccine and were beginning the tests.
မတ်လ 25 ရက်နေ့တွင်၊ စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ဦးဆောင်သူမှ ၎င်းတို့သည် ကာကွယ်ဆေး၏ စုပေါင်းမှုကို အပြီးသတ်နေပြီးဖြစ်ကာ စမ်းသပ်မှုများကို စတင်နေပြီဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါသည်။
အစောပိုင်း ရောင်းချမှုများ အပြီးတွင် အချို့သော စတိုးဆိုင်များသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထူးရောင်းချမှုကို မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း aldi က အင်္ဂါနေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည်။
on 19 february, the singapore red cross announced that it would send $2.26 million worth of aid to china.
ဖေဖော်ဝါရီလ 19 ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာ 2.26 သန်း တန်ဖိုးရှိသော အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
however, romero also announced further investigation by the geologic and mining national service sergeotecmin and the bolivian institute of science and nuclear technology.
ထို့ကြောင့် ၎င်းဓာတ်သတ္တုများသည် ရေဒီယိုသတ္တြွိကပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်း သံသယမှာ မရှင်းလင်းခဲ့ပေ။
ပါရှန်း နှစ်သစ်ကူး nowruz မတိုင်မီ မြို့တစ်မြို့မှ တစ်မြို့သို့ ယာဉ်သွားလာမှု အလွန်အမင်းများပြားနေသော်လည်း မြို့များအကြား ခရီးသွားလာမှုများအား ကန့်သတ်သည့် အစီအစဉ်များကို မတ်လတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
who အနေဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လေ့လာခဲ့သော ဆေးဝါးလေးမျိုးထဲတွင် chloroquine နှင့် ဆက်စပ် hydroxychloroquine တို့ ပါဝင်သည်ဟု မတ်လ 18 ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
farak meaning in telugu (Hindi (indiano)>Telugu)ho sedici anni (Italiano>Latino)no one can be this type of weird (Inglese>Hindi (indiano))generated by4visitors book (Italiano>Inglese)kawaii kunai (Giapponese>Inglese)meaning of na unna kadhalikiren in hindi (Tamil>Inglese)mujhe khasi sardi jukam hai (Hindi (indiano)>Inglese)हिंदी सेक्सी video videobf (Panjabi>Inglese)na unna kadilikare in hindi (Tamil>Inglese)saya suka awak dalam bahasa korea (Giapponese>Malese)habemus litteram (Latino>Italiano)high income (Inglese>Tagalog)kakanyahan (Inglese>Tagalog)kasingkahulugan ng tangkilikin tagalog (Tagalog>Inglese)chupa mi webos (Spagnolo>Inglese)being myself is what got me to where i am (Inglese>Portoghese)melepaskan pelukan (Malese>Inglese)usne mujhse jhoot bola (Hindi (indiano)>Inglese)abigail (Spagnolo>Arabo)text me on whatsapp nu (Inglese>Spagnolo)hilang tumpuan (Malese>Cinese semplificato)apa maksud noty dalam bahasa melayu (Inglese>Malese)usque ad finem et ultra comites (Latino>Italiano)